WINTER LOVE ISLAND INSTAGRAM: ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏အကောင့်အားလုံးကိုလိုက်နာပါ - သတင်း
အားလုံး insanely မထိုက်မတန်ဆောင်းတွင်း Love ကျွန်းသားများ၏ '' Instagram ကိုအကောင့်
ပြီးခဲ့သည့်ညကဆောင်းရာသီ Love Island သရုပ်ဆောင်စာရင်းကိုကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်းတွင်အမွှာ၊ အနာဂတ်သခင်နှင့် Rochelle Humes ၏ညီမတို့ပါဝင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးပွဲကိုသင်စိတ်အားထက်သန်စွာမျှော်လင့်နေစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Instagram ယှဉ်ပြိုင်သူများ Instagram ကိုနက်ရှိုင်းစွာငုပ်လျှိုးခဲ့သည်။ သူတို့ကမထိုက်မတန် selfies, ဗေဒခရီးစဉ်များနှင့်တစ်ဝက်အဝတ်အချည်းစည်းရိုက်ချက်များအများကြီး, သင်ကြိုဆိုပါတယ်။
ဆောင်းရာသီ Love Island Instagrams အားလုံးသည်ဤတွင်ဖြစ်သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @leanneamaning
Leanne ရဲ့ Insta tbh တော်တော်သေပြီ, ထိုကျွန်းသူကျွန်းသားပဲရေးသားချက်များ 10 ရှိပြီးသူမ၏ဇီဝ Winter Love ကျွန်း 2020 နှင့်သူမ၏အကောင့်ကို run သူအသေးစိတ်ကိုဖတ်တယ်။
သူမသည်ကတ္တီပါအိပ်ရာပေါ်၌ထိုင်နေစဉ်သို့မဟုတ်ကဖေးတွင်အေးအေးဆေးဆေးနေစဉ်အတွင်းရှိ Insta ကိုကြည့်နေစဉ်ကြည့်လိုက်သည်။
Leanne သည်ဆောင်းရာသီ Love Island အတွက် promo ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့ပြီး hashtags leannehive နှင့် walthamforestsbeyonce တို့ပါဝင်သည်။
လီယန်းသည်မိမိကိုယ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရသော၊ သူမကိုယ်တိုင်သူမကို ၁၀ ယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @siannisefudge
နောက်လိုက်များ - ၇,၈၀၀
Siânniseရဲ့ Instagram ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူမရဲ့ရှာဖွေနေမထိုက်မတန်၏ selfies နှင့် pics ပြည့်ဝ၏။ သူမ၏ဇီဝသည် 'ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုလုံး' ဖြစ်ပြီးသူမသည် Aladdin မှ Jasmine နှင့်အတူတီရှပ်ပါသည့်ပုံရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သူမသည်ဒစ္စနေးကြိုက်သူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုပြောခြင်းသည်ဘေးကင်း၏။
Love Islander တစ်ယောက်အတွက်Siânniseဟာသူမရဲ့ဓာတ်ပုံအတော်များများမှာပြုံးရွှင်နေပြီးသူမရဲ့ပန်းရောင်ဂျင်နဲ့အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်တွေကို Ayia Napa မှာမယုံနိုင်လောက်အောင်အခြေခံအကျဆုံးပါပဲ။
Siânniseသည်အလှပြင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးသူမ၏အကောင်းဆုံးနေ့သည်ပီဇာနှင့်ဒစ္စနေးရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ သူမရဲ့အမည်ပြောင် Princess Jasmine ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့စံပြလူသားကအရပ်ရှည်၊ မှောင်မိုက်၊
Instagram မှတစ်ဆင့် @evegale
နောက်လိုက်များ - ၁၆,၄၀၀
အမွှာတစ်ဝက်, Eveဝ၏ Instagram ကိုသူမ၏ဓာတ်ပုံများအများစုတစ် ဦး ရေကူးဝတ်စုံနဲ့သို့မဟုတ်အတွင်းခံအဝတ်အစားအတွက်သူမ၏ဖေါ်ပြခြင်းနှင့်အတူ, လေ့ကျင့်ရေးအတွက်ဂန္ Love Islander ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏ဇီဝဗေဒသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးသူမ၏အကောင့်ကိုအစ်မ (သူမ၏အမြွှာမဟုတ်ဘဲအခြားတစ်ခုကိုခန့်မှန်းခြင်း) နှင့်ဤဝမ်းနည်းဖွယ်ကမကထပြုထားသောပို့စ်များအားလုံးကိုအီးမေးလ်လိပ်စာကစီမံခန့်ခွဲနေသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
သူမ၏ Insta သည် Bali၊ Andulica နှင့် Ibiza ရှိခရီးများမှသူမ၏ညီမ Jessica နှင့်အတူဂန္ထဝင်အမွှာရိုက်ချက်များအားလည်းလိုက်နာသည်။
သူမသည်လက်မှတ်ထိုးဖောက်ခြင်းကိုလည်းပြီးပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ISAWI နှင့် Oh Polly တီးဝိုင်းများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
သူမ၏ Insta ရေငတ်ထောင်ချောက်များသည်လည်း Tyga ၏အာရုံကိုရရှိခဲ့သည်။ သူသည် she ၀ သည် Whatsapp တွင်သတင်းပို့နေသည်ဟုပြောဆိုပြီး Ibiza တွင်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @jessicarosegale
နောက်လိုက်များ - ၁၆,၈၀၀
အမွှာတွဲဖက်မှု၏အခြားတစ်ဝက်မှာဂျက်စီကာသည်နောက်လိုက်ရှေ့တွင်အနိုင်ရနေသည်။ သူမ၏အကောင့်ကိုသူမ၏အစ်မမှလည်းစီမံခန့်ခွဲထားပြီးရေပန်းစားသည့် bikini နှင့် underwear shots များကိုလည်းလိုက်နာသည်။
အဆိုပါအသက် 20 နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားရဲ့ Insta လည်းသူမ၏အစ်မအဖြစ်လန်ဒန်ဘဝ၏ Insta ပုံပြင်များကဲ့သို့တူညီသောအားလပ်ရက်ရိုက်ချက်များဝေမျှပေးသည်။
သူမသည်အခြေခံအားဖြင့် Tape, Cirque Le Soir နှင့် The Hangout တွင်တစ်ညလုံးအိပ်မောကျသည်။
အန်တိုနီယိုဂျိုစီသည်သူမအတွက်အကောင်းဆုံးစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးသူမသည် ၁၀ ယောက်တွင် ၇ ယောက်ခွဲရှိသည်ဟုဂျက်စီကာကပြောကြားသည်။
Shaughna Phillips က
Instagram မှတစ်ဆင့် @shaughnaphillips
နောက်လိုက်များ - ၉,၇၀၀
Shaughna ၏ Instagram သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကျွန်းသူကျွန်းသားတစ် ဦး ၏စံနမူနာဖြစ်သည်။ သူသည် selfies နှင့် club nights များပြည့်နှက်နေသော်လည်းသူမ၏ကိုယ်အလေးချိန်လမ်းကြောင်း၏ပုံရိပ်များကိုပါဖော်ပြသည်။
သူမ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ E.P. နှင့် post မှာသူမကအတိုကောက် E.P. နှင့်အတူသူမ၏ဖခင်အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် သူမမည်မျှချစ်ပြီးလွဲချော်နေသည်။
Shaughna ၏ပရိုဖိုင်းသည်သူမ၏အစ်ကို၊ အခြားမိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများနှင့်လည်းသူမ၏ပုံများပါရှိသည်။
သူမသည်ယခင်ကျွန်းကျွန်းဂျက် Fincham ကင်ပေါ်မှာငါ့ကိုနည်းနည်းနှင့်သူမ၏နှစ်သစ်ရဲ့ resolution ကို fuckboys မှကောင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြောပါတယ်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @sophpiper_
နောက်လိုက်များ - ၂၃,၄၀၀
ဆိုဖီ Piper, Rochelle Humes '' ညီမခေါ်, တစ် ဦး ထက်ပိုထူထောင်အောက်ပါနှင့်အတူကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။ ဆိုဖီရဲ့ပရိုဖိုင်းကို Rochelle နှင့်အတူ selfies, အားလပ်ရက်၏ pics, ပွဲတော်များ, Nightouts နှင့် pics နှင့်ပြည့်ဝ၏။
သူမသည် Ibiza တွင်ရာသီတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးသူမ၏ Instagram တွင်နွေရာသီ၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကိုသင်တွေ့နိုင်မည့်ပုံပြင်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @turley_paige
နောက်လိုက်များ - ၃၀၅၀၀
Paige ၏ Instagram သည် selfie နှင့်ကလပ်ဓာတ်ပုံများနှင့်ပြည့်နေသည့်ဂန္ထဝင် Love Islander Vibe ဖြစ်သည်။
သူမ၏ Instagram တွင်ဘာလီရှိဗေဒဆိုင်ရာခရီးသွားဓာတ်ပုံများလည်းပါရှိသည်။ အချို့သည် Marbella ရှိဟိုတယ်လသာဆောင်များပေါ်တွင်ဗေဒဆိုင်ရာဂန္တ ၀ င်ပန်းချီကားများမဟုတ်ပါ။
Paige Lewis က Capaldi ရဲ့ဟောင်းသူမကသူတို့နေဆဲအိမ်ထောင်ဖက်နေကပြောသည်။ သူမသည်အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် Britian's Got Talent ဆီမီးဖိုင်နယ်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၏ကျော်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်ပြောဆိုချက်လည်းရှိသည်။
အဆုံး၌ဖြစ်ပျက် 365 DNI
Instagram မှတစ်ဆင့် @ michaelboateng01
Instagram: @ michaelboateng01
သူ Mike ၏ Instagram သည်စာကျက်မှု ၁၉ ခုသာရှိသော်လည်းသူ၏ဇီဝဗေဒတွင်သူ၏ twitter ပါ ၀ င်သည်။ သူ၏အကောင့်ကိုသူ၏အစ်ကိုများကလုပ်ဆောင်နေသည်။
သူ၏ Instagram သည်သူမအနေနှင့်သူမ၏ပုံများဖြစ်ပြီးရံဖန်ရံခါသူငယ်ချင်းများနှင့်တင်ဆက်ခြင်းနှင့် hashtag beastmode နှင့်အတူထူးဆန်းသော cringe လေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုကိုတင်ခြင်းဖြစ်သည်။
မိုက်ခ်သည်ရဲအရာရှိတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးနာမည်ကျော်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအနည်းငယ်ရှိပြီး ၃ မိနစ်အကြာတွင်သူသည်ရက်စွဲတစ်ခုချန်ထားခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @connordurman
နောက်လိုက်များ - ၈,၅၀၀
Connor ရဲ့ Instagram ကိုတစ် ဦး ဂန္လူကလေး Vibe ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးများနှင့်အတူအဝတ်အချည်းစည်းတစ်ဝက် selfie, ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ရေငတ်ထောင်ချောက်ဓာတ်ပုံများ။
Connor သည်သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသော်လည်းယခုသူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို Naked Barista ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Aus တွင်နေစဉ် Connor သည်ရိုက်ကူးရေးသမားဖြစ်သည်။
သူ၏နာမည်ကျော်ပန်းချီကားသည် Maya Jama ဖြစ်ပြီးသူသည် hummus ကိုစွဲစွဲလမ်းစွာစွဲကိုင်ပြီးတစ်နေ့တာအိုးတစ်လုံးရှိသည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @_callum_jones
နောက်လိုက်များ - ၈,၄၀၀
Love ကျွန်းသည်လက်ဝှေ့သမားတစ် ဦး ကိုနှစ်သက်ပြီးယခုနှစ် Tommy Fury ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်သည်။ Callum ရဲ့ Instagram ကိုပို။ ပင် Connor ရဲ့ထက်လူပျို Vibe ၏။
Las Vegas တွင်ညအိပ်ခုံများ၊ လောင်းခြင်းများနှင့် LADS နှင့်ဓာတ်ပုံများအပြည့်ပါ။
သူ၏ Insta သည်လက်ဝှေ့ထိုးပန်းချီကားများနှင့်ရံဖန်ရံခါအားကစားရုံများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
Callum သည်သူ့ကိုယ်သူ ၁၀ ယောက်တွင် ၉ ယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးထိုင်းအစားအစာများကိုချက်ပြုတ်သည်။ ရသည်မှာကြောင်းအရာပါပဲ။
Instagram မှတစ်ဆင့် @nas_jm
နောက်လိုက်များ - ၂,၉၀၀
Nas ရဲ့ Instagram ကိုသူ၏အဓိကပို့စ်များကိုထိုင်းနှင့်ခရိုအေးရှားရှိပင်လယ်ကမ်းခြေကဲ့သို့ဗေဒဆိုင်ရာနေရာများတွင်တင်ထားသည်။
သူ၏ Instagram သည် Brunel မှပထမတန်းစားအားကစားသိပ္ပံဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည့်အချိန်တွင်သူသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောပုံကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူ့ကို Clapham Common နှင့် SW4 သို့သွားခြင်းလည်းပါဝင်သည်။
သူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ပန်းချီကားကတော့ Naomi Scott ဖြစ်ပြီး Aladdin ရုပ်ရှင်အသစ်မှာမင်းသမီး Jasmine ပါ။ သူဟာသူ့ကိုယ်သူ cheeky and charismatic ဟုဖော်ပြသည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @olliesjwilliams
နောက်လိုက်များ - ၁၀,၆၀၀
ယခုနှစ်တွင်နေထိုင်သူ posh ကောင်လေး, Ollie ၏ Insta ဂန္ထဝင် Tory ဖြစ်ပါသည်, တစ် ဦး tweed ဂျာကင်အင်္ကျီထဲမှာသူ့ကို၏ pics အပြည့်အဝ, ရပ်ဂ်ဘီကစားခြင်း, နှင်းလျှောစီး, မြင်းစီးခြင်းနှင့်သူ၏ Labradors နှစ်ခုနှင့်အတူသူ၏တိုင်းပြည်အိမ်ခြံမြေစူးစမ်း။
၎င်းတွင်သူ၏အဖော်များ၊ မိသားစုများနှင့်အားကစားခန်းမမှအားကစားဆိုင်ရာ selfies များစွာပါသောသူ၏ပုံများပါ ၀ င်သည်။ Ollie ၏ Insta လည်းလှေနှင့်သမုဒ္ဒရာအမြင်များများများနှင့်အတူ, ငြူစူသောစိတ်ခရီးသွားနေရာများနှင့်ပြည့်၏။
Ollie သည်ပေါင် ၉ သန်းတန်အိမ်ခြံမြေကိုအမွေခံပြီးနောက်ဆုံးတွင် Lord ဖြစ်လာလိမ့်မည်၊ သူသည် Cornwall ရှိကမ်းခြေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်သည်။
Winter Love Island 2020 သည်ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်စတင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများနှင့်အတင်းအဖျင်းများကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးသိလိုလျှင် Facebook ပေါ်က Love ကျွန်းရဲ့ Holy Church လိုပဲ။
•သူတို့ဒီမှာရှိနေတယ် ဆောင်းရာသီ Love Island 2020 ပြိုင်ပွဲဝင်များကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါ
• Lewis က Capaldi ၏ဟောင်း Paige Turley ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ Love Island အတွက် 'တက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့' ခဲ့သည်
•ဆောင်းရာသီအတွင်း၌ Love Islander Ollie Williams ၏ပေါင် ၉ သန်းအိမ်